Weeraradan oo ahaa kuwo mataana ah ayaa midka koowaad waxaa lagu dhuftay bar koontarool oo ay joogeen Ciidamada Nabad sugidda, kaas oo istish-haadigii labaad u fududeeyey in uu gaaro Hotelka.
Qofka labaad ayaa isna gaariga ku dhuftay Hotelka Peace oo ahaa hadafka asalka ah ee ay joogeen saraakiisha AMISOM iyo shaqaale katirsan Q.Midoobe.
Hotelka ayaa ka soo horjeeda Xerada Xalane ee magaalada Muqdisho, Wuxuuna sidoo kale aad ugu dhow yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 30 ka mid ah cadowga oo ay ku jiraan saraakiil caddaan ah ayaa lagu dilay weerarka, Iyadoona 45 kalena lagu dhaawacay. Qaraxyada ayaa sidoo kale burbur xoogan u geystay dhismayaasha ka ag dhawaa garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Ragga Fuliyay Weeraradaas waxaa ka mid ahaa Maxamed Abuukar M. Calasoow oo sidoo kale loo yaqaano (Ahlu Sufa).
Ahlu Sufa wuxuu ahaa geesi ka dhashay beelweynta Abgaal gaar ahaan Jufada Daa’uud.
Wuxuu in muddo ah ku dhex jiray Jihaadka iyo mujaahidiinta, Islamarkaana in wax badan soo taagnaa saaxaadka jihaadka iyo goobaha ribaadhka.
Wuxuu ahaa nin ku ad-adag cadowga Alle, oo cabsan towxiidka saxda ah iyo micnaha Al-walaa wal-baraa.
Wuxuu Allaah dartii u jaray qof waliba oo ay diintu jartay xitaa hadduu yahay dad midka ugu dhow eheladiisa, wuxuuna sidoo kale Allaah dartii u xiriiray qof waliba oo ay diintu xiriirisay xitaa haduu yahay midka dadka ugu fog.
Mudadii uu camalka ka tirsanaa wuxuu ka soo shaqeeyey majaalka dacwada iyo Maktabka Jayshka Xarakada Al-Shabaab.
Ka hor inta uusan howlgalka u dhaqaaqin, Ayuu ka tagay dhambaal qalbiga kasoo go’ay oo uu dhiigiisa ku qoray, waxaana uu wareysi dheer oo uu siiyey Idaacadda Islaamiga Andalus kaga waramay dareenkiisa ku aadan howlgalka uu ku sii wajahan yahay iyo fariinta uu walaaladiisa kaga tagayo.